युरोपमा कोरोना खोपको अभाव भएपछि कैयौँ स्थानमा खोप कार्यक्रम नै स्थगित ! « News24 : Premium News Channel
युरोपमा कोरोना खोपको अभाव भएपछि कैयौँ स्थानमा खोप कार्यक्रम नै स्थगित !
एजेन्सी, १० माघ । कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपकाे अभाव देखिएपछि युरोपेली संघका देशहरूमा खाेप कार्यक्रम नै स्थगित भएका छन् । उक्त खाेप विकास गरिरहेको बेलायती कम्पनी एस्ट्राजेनिकाले खाेप उत्पादनमा देखिएको समस्याका कारण अनुमान गरिएभन्दा कम मात्रामा खोप उत्पादन हुने र वितरणमा पनि समस्या हुने बताएपछि युराेपेली संघ निराश बनेको छ ।
बिबिसीका अनुसार युरोपका कयौँ भागमा फाइजररबायोएनटेकले वाचा गरे अनुरूपको आपूर्ति नगरेपछि कोभिडको खोप दिने काम सारिएको वा रोकिएको बताइएको छ।
अक्सफर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा खोप विकास गरेको एस्ट्राजेनिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो। यो खोपलाई हालसम्म सङ्घको नियामक निकायले प्रयोगका लागि स्वीकृत गरिसकेको छैन।
यो महिनाको अन्त्यसम्ममा खोपलाई स्वीकृत दिन सकिने बुझिएको छ। कयौँ युरोपेली देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या उकालो लागिरहेका बेला अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनीले अस्थायी रूपमा आपूर्ति घटाउँदा खोप वितरण प्रभावित भएको हो।
खोप कार्यक्रम रोकियो
जर्मनीको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राज्य र इटलीका कयौँ क्षेत्रमा खोपको पहिलो मात्रा दिने काम नै रोकिएको छ। म्यड्रिडमा स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिने समेत बन्द गरिएको छ।
गत साता फाइजरले आउँदा केही साताका लागि खोपको आपूर्ति ढिलो हुने जनाएको थियो। बेल्जियममा एउटा कारखानाको क्षमता विस्तारको काम भएकाले ढिलो हुने फाइजरले बताएको थियो।
ईयूले फाइजरबाट मात्र ६० करोड डोज खोप मगाएको छ। उसले अर्को अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाको खोपलाई समेत स्वीकृति दिएको छ। ढिलासुस्तीलाई लिएर हङ्गेरीका दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री भिक्टोर अर्बानले ईयूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।
नाइजेरियामा सर्पदंसबाट वर्षेनी दुई हजार मानिसको मृत्यु
एजेन्सी । नाइजेरियामा हरेक वर्ष सर्पको टोकाइबाट करिब २,००० मानिसको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ
तेह्रथुमका कृषकहरुका लागि ‘आलु भण्डारण केन्द्र’ बरदान साबित